Affiliate marketing 101 - How to use PLR to establish Affiliate Marketing Management » Somali Free courses
Somali Free courses
Hel Free Books
Forum | Su’alaha ardayda
Sida loo galo korsada
Website xayeysiin ufuran.
Affiliate marketing 101 – How to use PLR to establish Affiliate Marketing Management
by IambuzuriPosted on April 15, 2022
Haddi aad hadda bilaabayso ama aad tahay khabiir khibrad leh, maqaallada PLR waa il macluumaad oo aad u wanaagsan oo loogu talagalay xarumaha maamulka dhismaha. Waa muhiim in la xasuusto in furaha ka faa’iidaysiga suuqgeynta xiriirka uu yahay ku qanacsanaanta macaamiisha. Haddii aad bixiso wax dadku rabaan, way iibsan doonaan. Markaa gaarsii wixii aad ballan qaaday! Ha iloobin inaad ku darto shuruudaha iyo shuruudaha bixiyaha PLR sharaxaadda alaabtaada. Markaa waxaad u socon doontaa jidkaaga ganacsi online ah oo guuleysta!
Faa’iidada suuqgeynta xiriirka la leh
Faa’iidada suuqgeynta xiriirka la leh waxay ku xiran tahay tirada taraafikada ee la soo saaro. Faa’iidada barnaamij gaar ah aad ayey u kala duwanaan kartaa. Marka macaamiilku gujiyo isku xirka iibiyaha ee mareegahaaga, waxaad heli doontaa qiime siman. Guushaada waxaa lagu qiyaasi karaa tirada iibka ee ka dhashay taraafikadan. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad heli karto taraafig badan oo shabakad ah, waxaad yeelan doontaa faa’iido sare. Hababka ugu caansan ee lagu go’aamiyo waxqabadka xiriirka la leh waa qiimaha gujinta, qiimaha beddelka xayeysiiska, iyo taraafikada shabakadda.
Jiilka taraafigga ka sokow, waa inaad sidoo kale la socotaa xidhiidhadaada xidhiidhsan. La-hawlgalayaashaada xiriir la leh ayaa laga yaabaa inay beddelaan isku xirka, ama sharraxaadaha alaabta, waqti ka dib. Tani waxay ka dhigan tahay inaad si joogto ah u cusboonaysiiso isku xirka. Lahaanshaha xiriirinta xiriirka dhacay waxay kuu keeni kartaa saacado badan oo madax-xanuun ah, waxayna xitaa keeni kartaa faa’iido lumis. Sidan, waxaad ku kordhin kartaa faa’iidada suuqgeynta xiriirka la leh. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah talooyinka lagu kordhinayo faa’iidada suuqgeynta xiriirka la leh. Haddii aad raadinayso inaad kordhiso dakhligaaga, tixgeli inaad abuurto degel si aad u horumariso alaabta ku xidhan.
Erayada caadiga ah ee lagu isticmaalo suuqgeynta affiliate plr
Marka aad ku cusub tahay suuqgeynta xiriirka la leh, waxay noqon kartaa jahawareer inaad fahamto ereybixinta. Waxaa jira dhowr eray oo aad u baahan tahay inaad ogaato, oo ay ku jiraan Qiimaha Lead kasta (CPL) iyo Pay Per Click (PPC). Si aad wax badan u barato, akhri maqaalkan. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad barato ereyo kale oo laga yaabo inaad la kulanto. Waa kuwan tusaalayaal:
‘Riijin gaar ah’ waxa loola jeedaa tirada gaarka ah ee jeer ee booqde uu riixay xiriirka xiriirka la leh. Si kale haddii loo dhigo, isla qofkaas ayaa riixi kara isla isku xirka xiriiriyaha 100 jeer oo weli helay hal gujin oo gaar ah. “Tixitaanka gaarka ah” waxay kaga duwan tahay “riixyada ceeriin” taasoo ah in hal booqde uu marar badan riixi karo xiriiriyaha xiriirka la leh. Si kastaba ha ahaatee, gujin gaar ah lama mid aha isla qofka, markaa waxaad u baahan tahay inaad tan maskaxda ku hayso.
Mid ka mid ah tillaabooyinka ugu adag ee bilowga ganacsigaaga suuqgeyneed ee xiriirka la leh ayaa ah go’aaminta niche. Run ahaantii waxa jira kumanaan niches oo laga dooran karo. Habka ugu fiican ee lagu heli karo niche saxda ah waa in lagu sameeyo cilmi baaris amazon. Mareegtan waxa ay leedahay tobanaan kun oo badeecooyin ah, mid kasta oo ka mid ah alaabooyinkaasna waxa uu leeyahay meel gaar ah. Raadi alaabada ku dhex jirta nichekan oo leh tiro badan oo faallooyin ah. Tani waxay muujinaysaa tiro badan oo iib ah.
Waxaa jira noocyo badan oo nich ah, oo u dhexeeya mid aad u ballaaran ilaa mid aad u cidhiidhi ah. Markaad baareyso niches kala duwan ee la heli karo, tixgeli inaad rabto inaad diirada saarto alaabada ama adeegyada. Alaabooyinka guud ahaan way ka fududahay in la iibiyo marka loo eego adeegyada waana ka jaban yihiin. Adeegyadu aad bay u adkaan karaan in la iibiyo oo waxay u baahan karaan shaqo dheeraad ah. Markaad go’aansato niche aad jeceshahay inaad diirada saarto, waxaad bilaabi kartaa inaad diirada saarto dadaalkaaga suuqgeyneed ee aaggaas.
Helitaanka bixiye PLR
Haddii aad tahay suuqgeyn xiriir la leh, waxaad u badan tahay inaad tixgelisay isticmaalka alaabta PLR. Alaabooyinka PLR waa kuwo raqiis ah, waxayna ku badbaadin karaan waqti badan. Waxaad u isticmaali kartaa ujeedooyin kala duwan, oo ay ku jiraan abuurista magnets-ka rasaasta, wargeysyada iimaylka, qoraalada warbaahinta bulshada, iyo ebooks. Haddii aad hadda bilaabayso, PLR waxay kaa caawin kartaa inaad bilowdo adoon waqti badan ku bixin inaad naftaada abuurto waxyaabo.
Si aad u hubiso inaad helayso nuxur wanaagsan, hel goobta xubinnimada PLR ee sumcad leh. Shirkadahani waxay ku takhasusaan meelo gaar ah, waxayna soo saaraan waxyaabo tayo sare leh bil kasta oo aad dib u iibin karto. Qaar ka mid ah boggaga xubinnimada PLR waxay iibiyaan e-buugaagta, sida loo sameeyo, garaafyada, iyo buugaagta shaqada. Waxaad xitaa dooran kartaa barnaamij ku saleysan is-diiwaangelinta si aad u geli karto macluumaad cusub mar kasta oo aad rabto.
Posted in lacag samee
Published by Iambuzuri
View all posts by Iambuzuri
Prev What is google adsense ?
Next 5 Ways To Make Money Online With Google For Free
One Reply to “Affiliate marketing 101 – How to use PLR to establish Affiliate Marketing Management”
Ad ad mahadsadsanid walaal lkn what’s app maledihiin
Daawo Sida loo dalbado
© Copyright 2020 – 2022 Somali Free courses is owned & published OkHit Media LTD.